ကြက်ဥကောက်နေတုန်း အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ကြက်ဖကဆိတ်လိုက်လို့ သွေးအထွက်လွန်ပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ အဘွားအို - Mckzone Daily
ကြက်ဥကောက်နေတုန်း အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ကြက်ဖကဆိတ်လိုက်လို့ သွေးအထွက်လွန်ပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ အဘွားအို
Posted By: Jasmine Jasmine September 4, 2019
သြစတေးလျနိုင်ငံတောင်ဖက်ပိုင်းမှာနေထိုင်တဲ့အဘွားအိုတစ်ဦးဟာ သူ့မ၏အိမ်အနောက်ဖက်ခြံဝင်းထဲမှ ကြက်ဥကောက်နေတုန်း ကြက်ဖတစ်ကောင်ကသူမ၏ ဘယ်ဖက်ခြေထောက်ကို ဆိတ်လိုက်တဲ့အတွက် သွေးထွက်လွန်ပြီးနောက် မူးမေ့လဲကာ သေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ် ။ အလောင်းကို ခွဲစိတ်စစ်ဆေးခဲ့ချိန်မှာတော့ ဘယ်ဖက်ခြေသလုံးရဲ့အောက်ဖက်နားမှာ သေးငယ်တဲ့ပေါက်ပြဲဒဏ်ရာနှစ်ခုရှိခဲ့ပြီး ၊ အဆိုပါခြေသလုံးရှိသွေးကြောထုံးလေက ပေါက်ပြဲသွားခဲ့တဲ့အတွက် သွေးအထွက်လွန်ပြီးသေဆုံးသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ် ။ သွေးကြောထုံးလေးတွေဟာ ကြီးလာခြင်း ၊ ရောင်ကိုင်းခြင်း နှင့် သွေးပြန်ကြောများရစ်ပတ်နေခြင်းစသည့်လက္ခဏာများရှိပြီး အပြာရောင် (သို့) ခရမ်းရင့်ရောင်အနေနှင့်လည်း မြင်တွေ့ရတတ်ပါတယ် ။ အဆိုပါသွေးကြောထုံးလေတွေဟာ အရေပြားပေါ်မှာ စူထွက်နေတတ်ကြပါတယ် ။သွေးပြန်ကြောလေးတွေဟာ ခြေထောက်တွေမှာသာအများဆုံး ထိခိုက်မှုဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ် ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မတ်တပ်ရပ်ခြင်း နှင့် လမ်းလျှောက်ခြင်းတို့က ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းရှိ သွေးပြန်ကြောလေးတွေကို pressure ဖြစ်စေမှုက ပိုပြီးများပြားတဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ် ။
၎င်းကြက်ဖက အဘွားအိုကို ဘာလို့ဆိတ်ခဲ့တာလဲဆိုသည့် အကြောင်းအရာကိုတော့ ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပေမဲ့ ၊ အဆိုပါကြက်ဖကတော့ အတော်လေးရန်မူတတ်တဲ့ကြက်ဖဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ် ။မမျှော်လင့်ထားကြတဲ့ မတော်တဆမှုကြောင့် လူအများစုက အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အသေးလေးတွေတောင် လူကိုသတ်နိုင်ကြောင်း သတိပေးခဲ့ကြပါတယ် ။
တိရစ္ဆာန်နှင့်ပက်သက်ပြီးသေဆုံးမှုများကို လေ့လာသုံးသပ်နေတဲ့ Professor Byard ၏ပြောဆိုချက်အရ. ” တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ တိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့်ပဲမဟုတ်ပါဘူး ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာချက်အရ အိမ်အနီးအနာတွေမှာရှိတဲ့ လူတွေကလည်း တစ်ခုခုနဲ့ ခြေထောက်အနားမှာရှိတဲ့ သွေးပြန်ကြောတွေကိုထိမိရင်းနဲ့ သွေးထွက်လွန်ခြင်းမျိူးလည်းဖြစ်တတ်ကြောင်း ” ပြောဆိုခဲ့ပါတယ် ။
သွစတေးလနြိုငျငံတောငျဖကျပိုငျးမှာနထေိုငျတဲ့အဘှားအိုတဈဦးဟာ သူ့မ၏အိမျအနောကျဖကျခွံဝငျးထဲမှ ကွကျဥကောကျနတေုနျး ကွကျဖတဈကောငျကသူမ၏ ဘယျဖကျခွထေောကျကို ဆိတျလိုကျတဲ့အတှကျ သှေးထှကျလှနျပွီးနောကျ မူးမလေဲ့ကာ သဆေုံးသှားခဲ့ရပါတယျ ။ အလောငျးကို ခှဲစိတျစဈဆေးခဲ့ခြိနျမှာတော့ ဘယျဖကျခွသေလုံးရဲ့အောကျဖကျနားမှာ သေးငယျတဲ့ပေါကျပွဲဒဏျရာနှဈခုရှိခဲ့ပွီး ၊ အဆိုပါခွသေလုံးရှိသှေးကွောထုံးလကေ ပေါကျပွဲသှားခဲ့တဲ့အတှကျ သှေးအထှကျလှနျပွီးသဆေုံးသှားခွငျးဖွဈကွောငျး တှရှေိ့ခဲ့ကွပါတယျ ။ သှေးကွောထုံးလေးတှဟော ကွီးလာခွငျး ၊ ရောငျကိုငျးခွငျး နှငျ့ သှေးပွနျကွောမြားရဈပတျနခွေငျးစသညျ့လက်ခဏာမြားရှိပွီး အပွာရောငျ (သို့) ခရမျးရငျ့ရောငျအနနှေငျ့လညျး မွငျတှရေ့တတျပါတယျ ။ အဆိုပါသှေးကွောထုံးလတှေဟော အရပွေားပျေါမှာ စူထှကျနတေတျကွပါတယျ ။သှေးပွနျကွောလေးတှဟော ခွထေောကျတှမှောသာအမြားဆုံး ထိခိုကျမှုဖွဈပှားတတျပါတယျ ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မတျတပျရပျခွငျး နှငျ့ လမျးလြှောကျခွငျးတို့က ခန်ဓာကိုယျအောကျပိုငျးရှိ သှေးပွနျကွောလေးတှကေို pressure ဖွဈစမှေုက ပိုပွီးမြားပွားတဲ့အတှကျ ဖွဈပါတယျ ။
၎င်းငျးကွကျဖက အဘှားအိုကို ဘာလို့ဆိတျခဲ့တာလဲဆိုသညျ့ အကွောငျးအရာကိုတော့ ဖျောပွထားခွငျးမရှိပမေဲ့ ၊ အဆိုပါကွကျဖကတော့ အတျောလေးရနျမူတတျတဲ့ကွကျဖဖွဈကွောငျး သိရှိရပါတယျ ။မမြှျောလငျ့ထားကွတဲ့ မတျောတဆမှုကွောငျ့ လူအမြားစုက အိမျမှေးတိရစ်ဆာနျအသေးလေးတှတေောငျ လူကိုသတျနိုငျကွောငျး သတိပေးခဲ့ကွပါတယျ ။
တိရစ်ဆာနျနှငျ့ပကျသကျပွီးသဆေုံးမှုမြားကို လလေ့ာသုံးသပျနတေဲ့ Professor Byard ၏ပွောဆိုခကျြအရ. ” တိရစ်ဆာနျတှရေဲ့ တိုကျခိုကျခွငျးကွောငျ့ပဲမဟုတျပါဘူး ၊ ကြှနျတျောတို့ရဲ့လလေ့ာခကျြအရ အိမျအနီးအနာတှမှောရှိတဲ့ လူတှကေလညျး တဈခုခုနဲ့ ခွထေောကျအနားမှာရှိတဲ့ သှေးပွနျကွောတှကေိုထိမိရငျးနဲ့ သှေးထှကျလှနျခွငျးမြိူးလညျးဖွဈတတျကွောငျး ” ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ ။
Be the first to comment on "ကြက်ဥကောက်နေတုန်း အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ကြက်ဖကဆိတ်လိုက်လို့ သွေးအထွက်လွန်ပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ အဘွားအို"